Forum serasera malagasy fanafaran'entana avy any ivelany - Dinika forum.serasera.org
fanafaran'entana avy any ivelany
Fitohizan'ny hafatra : fanafaran'entana avy any ivelany
vonynive - 08/10/2013 15:27
tsy misy tombontsoa ho an'ny firenena ny fanafarana entana hamidy fotsiny eto Madagasikara fa ireo vola vahiny no mivoaka betsaka, tsy mihodina eto an-toerana akory ny vola fa miverina any @ tany nividianana ny entana, tsy miteraka famoronan'asa,
hery - 11/02/2014 09:08
Sady vao maika aza manimba ny vokatra eo an-toerana. Nefa tsy hanafatra ve?
- Ny vokatra eo an-toerana dia matetika tsy ampy na tsy mahatakatra ny fifaninanna (eo amin'ny tolotra sy ny tinady) Ny akanjo vita malagasy ohatra dia na ratsy na lafo loatra ka aleon'ny olona mividy vita sinoa.
- Ny Vokatra avy any ivelany dia vokatry ny fifampiraharahana amin'ireo samy mpanam-bola ka matetika tsy hitany akory ny hetra aloany. Raha toa ka atao midangana ny hetran'ny entana afarana nefa misy ao Madagasikara dia mety hilamina io. Ireo fitaovana rehetra misy eo Madagasikara nefa afaran'ny olona dia atao ambony be ny hetran'ny douanes mampiditra azy.
- Ny toe-tsaina koa mbola mila miova. Marina fa eo ny tsy fananana kanefa tokony hieritreritra hoe ny mora tsy mba tsara. Izany hoe afaka mividy ny zavatra vita gasy na dia somary lafo aza kanefa tsara. Hamporisika ny vokatra gasy izany ary hamporisika ireo mpanao vita gasy ratsy ihany koa hanatsara ny vokany.
bazylou - 26/03/2014 10:28
Ho ela velona ny Eto an toerana. Tsy misy maha solo an ireo na iza miteny na iza.
Tsy ny fisainan ny gasy ao madagasikara no tokony niova fa ny sain ilay mpitondra sy ny any ivelany tsy manaraka ny zavatra misy ao an toerana.